Cillad ku jirta Aqoonsiga Dadka Google - iyo Khatarta | Martech Zone
Khamiista, Sebtember 5, 2013 Khamiista, Sebtember 5, 2013 Douglas Karr
Saxiib wanaagsan Brett Evans waxay keentay natiijooyin raadin xiiso leh indhahayga. Markay dadka qaar raadiyaan Douglas Karr, macnaha guud ee dhinaca dhinaceeda waxaa ka buuxa macluumaad ku saabsan soo saaraha filimka (aniga maahan), laakiin sawirkeyga.
Waxyaabaha xiisaha lihi waxa weeye in aanu jirin wax xidhiidh ah oo ka dhexeeya xogta Wikipedia iyo astaanteyda Google+. Ma jiro wax xiriir ah oo ku saabsan Wikipedia-kiisa oo aniga ila xiriira, ma jiro wax xiriir ah oo ku saabsan boggeyga Google+ oo ku xiraya boggiisa Wikipedia… marka sidee Google+ u go'aansaday inay ahaayeen isku si uun? (Waxaan lahaan jiray bog Wikipedia ah, laakiin way tirtireen markii aan saxay qaar kamid ah macluumaadka qaldanaa.)
Falanqeeyahayaga SEO bilaabay mawduuc ku saabsan kooxdiisii ​​SEO ee Google+ qaar badanna way faalloodeen sida Google ay u leedahay algorithm aad u xiiso badan… laakiin wali halkan ayey ku fashilantay. Anigu kama aanan walwalsaneyn taas ilaa JC Edwards waxay keeneen su'aal cabsi leh:
Nasiib wanaag kiiskan wuxuu ku lug lahaa agaasime filim, maxaa dhici lahaa haddii uu yahay ku xadgudub cunug ama gacan ku dhiigle oo ay raggaan wajiga u muujiyeen?
Taasi waa fikir aad u cabsi badan! Waxayna u egtahay wax lala yaabo in Google uu qaato aqoonsiga qofka oo uusan runti xaqiijin ama ku ansaxin in qof Waxay tan sameeyaan markay tahay meheradaha, waxsoosaarka iyo astaamaha ganacsiga. Waxaan ku arkaa dhibaato xagga hore!
Tags: qoraadiidmo la'aandouglas karraqoonsiga googleraadinta googlenatiijada raadinta
Deji Qoraa leh Yoast's WordPress SEO